E kpughere WatchOS 8 na WWDC 2021 | Esi m mac
Toni Cortes | 07/06/2021 21:25 | Apple Watch, ọtụtụ
Ihe ngosi nke ogbako Apple maka ndi mmepe, ama ama WWDC, na-eweta ozi ọma na anyị ga-ahụ afọ a na ngwanrọ nke ngwaọrụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ.
Y 8 nche nche nwere akụkụ ya pụrụ iche. Enwere ọtụtụ akwụkwọ ọhụụ nke sọftụwia Apple Watch gosipụtara. Ka anyị kwuo na ọ nweghị ndị dị oke mkpa nye ndị ọrụ, mana enwere obere ndozi ma e jiri ya tụnyere ụdị nke ugbu a. Ka anyị lee ihe ha kọwaara anyị.
Apple ka gosipụtara ozi ọma na anyị nwere ike ịhụ afọ a na watchOS 8. Onweghi nke dị egwu, mana enwere ekele maka na a na-etinye obere ọrụ ọhụụ iji nwee ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enye Apple Watch.
Ngwa iku ume na-aga n’ihu. Ugbu a, a na-akpọ Uche, ọ bụghị naanị na-adabere na iku ume, mana ọ na-enyere gị aka mgbe ịchọrọ iku ume na tụgharịa uche. Na gbasara iku ume, ugbu a ọ ga - ekwe omume ịlele usoro iku ume mgbe ị na - ehi ụra. Ihe na-adọrọ mmasị agbakwunyere nsuso ụra.
Ihe osise ndị dị na ndabere nke foto nwere ike ịgụnye ugbu a omimi ọ bụrụ na iji foto na ọnọdụ eserese. Ngwa foto ahụ agbanweela ụfọdụ mmelite na-atọ ụtọ, na-agbakwunye isi ihe na ncheta. Ugbu a ị nwere ike ịkekọrịta foto gị site na Apple Watch na Ozi ma ọ bụ Ozi.
Obere ihe ọzọ bụ na ọ bụrụ na ị ziga ozi ederede aka, ị nwere ike ịgụnye a Emoji. Site na Ozi, ị nwere ike ịchọ onyonyo izipu, ma nwee ohere ọsịsọ nke foto.
N’ikpeazụ a gụnyere ihe ndị ahụ na ngwa nchọta. Ugbu a ị nwere ike ịchọta gị AirTag site na Apple Watch. Dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eji elekere LTE gị wee ghara iji iPhone soro gị.
Ha egosipụtakwala anyị otu ngwa Weather si egosi anyị ma ọ bụrụ na mmiri ga-ezo n'awa ọzọ. Anyị ga-echere iji hụ ma ozi a ọ ga-adịkwa na mba anyị. Na watchOS 8, ị nwere ike kekọrịta egwu gị site na Apple Watch site na ngwa ngwa Ozi.
Na ụkpụrụ, ndị a bụ mmelite ndị egosiri anyị na isi okwu nke mechara. Anyị ga-echere ịnwale ndị nke mbụ betas iji lee ma onwere ozi ndi ozo nke egosighi anyi taa n'ihi oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » E kpughere WatchOS 8 na WWDC 2021
Ọ bụ macOS Monterey ọhụrụ nke nwere ụzọ mkpirisi, Njikwa Universal na ndị ọzọ